Apple dia afaka nanangana Apple TV vaovao hifaninana amin'ny Amazon Echo sy Google Home | Avy amin'ny mac aho
Apple dia afaka nandefa Apple TV vaovao hifaninana amin'ny Amazon Echo sy Google Home
Mitombo ny tsaho fa amin'ny fihaonamben'ny mpamorona manaraka izay hatao ao anatin'ny andro vitsivitsy, ny orinasan-tserasera Cupertino dia afaka manolotra fitaovana vaovao maro. Andro vitsy lasa izay dia niresaka taminao izahay momba ny MacBook Pro vaovao, izay afaka miharo sensor sensor iray sy écran OLED. Ireo solosaina finday vaovao ireo dia mety hamely ny tsena amin'ny faran'ity taona ity.
Etsy ankilany, honohono ihany koa fa Apple dia afaka manolotra tady vaovao ho an'ny Apple Watch avy amin'ny orinasan-damba malaza iray hafa. Ny tsy azo inoana dia ny handefasan'ny orinasa tady vaovao manitatra ny fahafahan'ny Apple Watch, toy ny tady GPS, metatra oxygen oxygen ...
Ny fitaovana farany nanampy ny lisitry ny fitaovana mety dia Apple TV vaovao. Apple TV vaovao izay hitsena ny tsena hifaninana amin'ny Amazon Echo sy Google Home. Ny Apple TV an'ny taranaka fahefatra dia nahatratra ny tsena tamin'ny faran'ny taona lasa, taorian'ny efa ho telo taona tsy nisy fanavaozana sy fanolorana fiasa vaovao marobe raha oharina amin'ilay maodely teo aloha.
Ka tsy azo inoana mihitsy hoe ho afaka hanavao ilay fitaovana enina volana monja ny orinasa aorian'ny fampisehoana azy, fa tsady tsy hetsika vaovao hataon'ny orinasa. Efa nanao hetsika sahala amin'izany izy rehefa nandefa ny iPad 3 ary enim-bolana taty aoriana dia nanavao indray ilay fitaovana tamin'ny alàlan'ny fandefasana ny iPad 4.
Araka ny VentureBeat, izay namoaka ity vaovao ity, Apple dia nisafidy ny hanavao ny Apple TV ankehitriny fa tsy handefa fitaovana amin'ny endrika mpandahateny mitovy amin'ny maodelin'i Amazon sy Google. Apple TV vaovao ity Io dia ahafahantsika mifanerasera 24 ora isan'andro amin'i Siri, satria hanana mikrô izy io sy mpandahateny mifangaro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Apple dia afaka nandefa Apple TV vaovao hifaninana amin'ny Amazon Echo sy Google Home
Ny ivon-angona Apple any Irlandy dia handany herinaratra bebe kokoa noho ny tanànan'i Dublin
Azo zahana izao ny Safari Technology Preview 5